ကဗျာချစ်သူ: နဒီဝင့်နိုင်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အသုံးအဆောင်များ
နဒီဝင့်နိုင်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အသုံးအဆောင်များ
နဒီက အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် အရမ်းလောကြီးတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီနှစ် သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကလည်း သင်္ကြန်သီချင်းခွေ အချိန်မီ ထွက်ရှိရေးအတွက် အစွမ်းကုန်အားထုတ်နေခဲ့ရသလို အသံသွင်းတာ အကတိုက်တာတွေနဲ့ မအားနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်အလုပ်အပြင် အဆိုဘက်ကိုပါ တွဲပြီး သီချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ပါ လုပ်နေရတဲ့ သူဆိုတော့ ဒီကဏ္ဍလေးအတွက် ခုမှပဲ နဒီ အချိန်ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နဒီတို့ အနုပညာရှင်တွေအတွက် ဇာတ်ကားတွေမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ Choice ဆိုတာထက် ဇာတ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ၀တ်စားပြင်ဆင်မှုတွေကို သုံးဖြစ်တာများပါတယ်။ Beautifulmodelworld.com ရဲ့ Celebrity Choices ကဏ္ဍအတွက် နဒီ့ အကြိုက်ပေ့ါနော်၊ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေထဲက အမြဲတမ်း အသုံးပြုဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ ပြောပြပေးပါ့မယ်။
(၁) - Cosmetic ဆိုရင် နဒီက မလိုအပ်ဘဲ မိတ်ကပ်တွေ သိပ်မလိမ်းဖြစ်ပါဘူး။း Revlon, (ABSOLUTE WHITE +)နို့ရည်လောက်ပဲ လိမ်းထားတယ်။ ပွဲအတွက်နဲ့ ရှုတင်အတွက်ကတော့ မိတ်ကပ် ဆရာနဲ့ပဲ လိမ်းပါတယ်။ နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲ လိမ်းဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မိတ်ကပ် ပါးပါးလေးပဲကိုယ့်ဟာကိုယ် လိမ်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် KMA (Make-up Palette) အမျိုးအစားသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ KMA က နဒီ့ အသားအရည်နဲ့ အဆင်ပြေလို့သုံးဖြစ်ပါတယ်။
(၂) - လက်ကိုင်အိတ် လေးတွေကလည်း နဒီ့အတွက်တော့ မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ဒီအိတ်လေးက မလေးရှားက ရလာတဲ့ လက်ဆာင်အိတ်လေးပါ။ အိတ်တွေကတော့ နဒီ့အတွက်တော့ ပွဲတက်ဆိုတာလည်း လိုအပ်သလို၊ အပြင်ထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဇာတ်လမ်းအတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တာချည်းပါပဲ။ အမြဲလိုလို ဒီဇိုင်းဆန်းလေးတွေ ၀ယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးထုပ်လေးတွေ ဆောင်းရတာလည်းကြိုက်တယ်။ နဒီ့ မျက်နှာနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် ဒီဇိုင်းလေးတွေကို ကြိုက်ရင် နဒီ ကတော့ဝယ်လိုက်တာပါပဲ။ ခရီးတွေသွားရင်ဆောင်တယ်။ တစ်ခါတရံ အပြင်သွားရင်လည်းဆောင်းတယ်။ စတိုင်တစ်မျိုးပေ့ါနော်။ (ဦးထုပ်လေးနဲ့လေ) မျက်မှန် - ကိုတော့ကားမောင်းရင် အမြဲတမ်းတပ်ဖြစ်တယ်။ ခရီးသွားတော့လည်း မျက်မှန်နဲ့ဆို မျက်လုံးနည်းနည်း သက်သာတယ်လေ။
(၃) - ရေမွှေးဆိုရင် - အခုလောလောဆယ်တော့ ESCADA(Magnetism) နဲ့ Gucci Guilty ကိုသုံးနေပါတယ်။ ကမ္ဘာအေး ဂမုန်းပွင့်ရဲ့ရန်ကင်းစင်တာ သွားဖြစ်တုန်းက ၀ယ်ထားတာပါ။ အနံ့ကြိုက်တာမှန်သမျှ အကုန်သုံးဖြစ်ပါတယ်။ အမွှေးလည်း အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ရေမွှေး တစ်ပုလင်းဝယ်ရင်ဘယ်လောက်မှ မသုံးရဘူး။ ခဏလေးနဲ့ကုန်သွားတတ်တယ်။
(၄) - ဖိနပ် တွေကတော့ ၀တ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်မယ့် ဒီဇိုင်းတွေ ၀ယ်ရင်းနဲ့ခုလိုပဲဒီဇိုင်းစုံရှိနေတော့တာပါ။ ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ ဖိနပ်ပါးလေးပဲစီးပြီးမောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ရှုတင်မှာဆိုလဲ ရိုက်ခါနီးမှ ဒေါက်မြင့်စီးတာများတယ် နဒီက ခြေထောက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ဖူးတော့ ဒီဖိနပ်လေးက Junction Mawtin (Zip) က၀ယ်ထားတာပါ။ နောက်ဆုံးဝယ်ထားတဲ့ ဖိနပ်လေးပါ။ လှတယ်နော်။
(၅) - ဖန်စီ ပစ္စည်းကို ဈေးဝယ်ထွက်ရင်လည်း ၀ယ်သလို အမေရိကားက အဒေါ်ကလည်း ဒီဇိုင်းဆန်းလေးတွေ အမြဲပို့ပေးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အဒေါ်ပို့ပေးတဲ့အထဲမှာ ဒီဇိုင်းအရမ်းဆန်းပြီး၊ အရမ်းကြီးလွန်းနေတာတွေဆိုရင် မဆွဲဖြစ်ဘူး မလှမှာဆိုလို့လေ။ အဲလိုပဲသိမ်းထားဖြစ်တာ တွေလည်းအများကြီးပါ။ ဒီဇိုင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ တွေ့ရင်လည်း ကိုယ်တိုင်ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်း ကြိုက်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ အရိုးဆုံးက အဆန်းဆုံးဖြစ်တယ်လေ။ နဒီကတော့ ဖက်ရှင်စတိုင်ကျ လှပဖို့ပဲ ရည်ရွယ်ပြီး ၀တ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ခရမ်းရောင် ဂါဝန်လေးနဲ့ဆိုရင် ကြိုးနဲ့လက်ကောက် ကိုအဖြူလေးဝတ်ရတာ ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆန်းတယ်ထင်တယ်လေ။ နဒီလှပါတယ်နော်။
(၆) - ဟန်းဆက်ကတော့ ခုလက်ရှိ နဒီကိုင်နေတာ iPhone အမျိုးအစားပါ။ Htc နဲ့ Haier တွေလည်းသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ကတော့အများဆုံး ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တယ်။ နယ်တွေသွားရင်လည်း ဖုန်းနဲ့ရိုက်ယူခဲ့တာများတယ်။ သီချင်းနာထောင်တယ်။ နဒီ့ အတွက် အလုပ်ကိစ္စတွေ ပြောဖို့အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအရာလေးတစ်ခုပေ့ါ။
(၇) - ဇူးဇူးစံနဲ့ ခွေးလေး ဖြူဖွေးပါ။ နဒီ့ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတာ အရုပ်ကလေးမဟုတ်ဘူးနော်။ နဒီ့ အချစ်ဆုံးခွေးလေးပါ။ ဖြူဖွေးလို့ခေါ်ပါတယ်။ သူက အရမ်းလိမ္မာတယ်လေ။ အိမ်မှာရှိတဲ့အချိန်ပျင်းလာတဲ့အခါ သူနဲ့ဆော့ရတယ်။ သူလေးကတော့ အချစ်ဆုံးတူမလေးပါ။ ပရိသတ်အတွက် အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင် တွဲရိုက်ပေးထားတာပါ။ နဒီ့ တူမလေးက ဇူးဇူးစံ တဲ့။ (၂) နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ နဒီ့ တူမလေးကလည်း အိုင်တင်အပြည့်နဲ့နော် .. ဟဲဟဲ ..
(၈) - ကွန်ပျူတာ - ipad သုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းနဲ့ဓါတ်ပုံကြည့်တယ်။ Laptop လည်းသုံးဖြစ်ပါတယ်။ Hp အမျိုးအစားပါ။ အားတဲ့အချိန်တွေဆို နဒီ့အတွက် အဖော်တွေပေ့ါ။
(၉) - အရုပ်တွေမှာ အညိုလေးက မွေးနေ့လက်ဆောင်ရထားတာပါ။ ကျန်တဲ့ အရုပ်တွေကတော့ လက်ဆောင်ပေးတာတွေလည်းပါတယ်။ ချစ်လို့ဝယ်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
Posted by ko naing at 6:58 AM
တီးချင်တာတီးလို့ ရတယ် ဒီပုံအောက်က Buttonbeast.com လေးကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါ
၀တ္ထုတို (4) (8)
ဓါတ်ပုံလင့်(1)
နားဆင်ရန် Flash သီချင်းများ (1)
၁၅. ငါနားလည်တဲ့ ....အချစ် ( ကဗျာ )
၁၅. ငါနားလည်တဲ့ ....အချစ် ( ကဗျာ ) စွန်တစ်ကောင်လို လွင့်မျောနေတဲ့ ငါရဲ့စိတ်ကို မင်းရဲ့အချစ် .... ကြိုးစလေးနဲ့ ချည်နှောင်လိုက်မယ်ဆိုရ...
ဒီ video သည် ညစ်ညံ့ video မဟုတ်ပါ မှတ်ချက် 18နှစ်မပြည့်သူမကြည့် ရ....
Melody inaMini Skirt Posted by Admin at Saturday, October 16, 2010 16 Oct Melody inaMini Skirt photo album.3more photos i...
yanmar Model Nwe Nwe Tun's Sexy Outdoor Fashion Photos Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Share to Goog...
Myanmar SEXY Celebrities: Moe Hay Ko, Chan Chan, Moe Yu San Myanmar Leading Actor and Model: Moe Yu San and Moe Hay Ko Moe Hay ...
ထာဝရ – မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) Buzz
ထာဝရ – မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) Buzz ...
ဒီဇင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ Strand Hotel မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ DOZO Fashion Design Technical School 22nd Anniversary - Fashion Show ...
ငတေတစ်ကောင်ရဲ့ ရူးသွပ်ခြင်း ကောင်မလေးရယ် ငါချစ်တဲ့နင်ကတောင် ငါပုံစံကို သက်ပြင်းတွေကြားမှာ...
Myanmar Popular Singer: A Thin Cho Swe's Outdoor fashion Myanmar Popular Singer: A Thin Cho Swe's Outdoor fashion Myanmar...
ပန်းစကား "မေ. လာ. လာ၊ နင်ကလည်း နေနိုင်လိုက်တာနော် ငါတို့အားလုံးနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားလိုက်တာဆိုတာ" နွေးနွေးက ...
လေဟာဉ် မတော်တဆ(Airplane accidents)
Lovey Lovey Lovey ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး အသုံးအဆောင်များ
သြဂုတ်လအတွက် အကောင်းဆုံး ရင်တွင်းဖြစ် ကဗျာများ
Eaindra Kyaw Zin